Lasibatra manokan’ny sivana ny vehivavy ao Iran · Global Voices teny Malagasy
Lasibatra manokan'ny sivana ny vehivavy ao Iran
Voadika ny 13 Jolay 2018 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 日本語, فارسی, 繁體中文, 简体中文, Español, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Aogositra 2007)
Ny bilaogin'i Mehdi Mohseni Jomhour (midika hoe Repoblika amin'ny teny Persiana) dia loharanom-baovao tanteraka momba ny olana ara-tsosialy sy ara-politika ao Iran. Raha “manenjika mamaky” bilaogy Iraniana ianao, dia tsy tokony hiala amin'ity. Olona eo amin'ny 1000 no mitsidika izany isan'andro.
Afaka mampahafantatra ny tenanao sy ny bilaoginao ve ianao ?
Mehdi Mohseni no anarako ary teraka tamin'ny taona 1979 tany Qom aho. Nianatra momba ny injeniera sivily aho. Karazana mpanao gazety mahaleotena aho. Tamin'ny taona 2002 no namoahako ny bilaogiko voalohany.
Monina any Iran Atsimo-Andrefana ianao. Afaka miresaka momba ireo bilaogera eo an-toerana ve isika? Ny tiako lazaina dia hoe ireo bilaogera miresaka momba ny tanàna misy azy?
Araka ny fantatrao, media tsy misy sisintany ny bilaogy. Afaka manoratra avy any amin'ny toerana rehetra any Iran ny bilaogera ary manana mpamaky na aiza na aiza manerana izao tontolo izao. Afaka miresaka momba ny zavatra rehetra izy ireo. Heveriko fa misy ireo bilaogy eo an-toerana izay manome vaovao fotsiny momba ny tanànany na toerana ao amin'ny blaoginy, saingy amin'ny ankapobeny, tsy dia raharahiana loatra izany karazana bilaogy mifantoka amin'ny eo an-toerana izany.
Vehivavy ao anatin'ny faribolana fitifirana
Inona no olana lehibe eo amin'ireo bilaogera Iraniana ankoatra ny fanivanana? Mampisy olana ve ny hackers (mpijirika)?
Miatrika olana maro ao Iran, tahaka ny hafa, ny bilaogera. Tranonkala Iraniana maro amin'ny ankapobeny, ary ny politika no tena voasivana. Tao anatin'ny roa taona farany, nanjary niha-ratsy ny fanivanana sy ny sivana. Indrindra fa marobe ireo bilaogim-behivavy voasivana. Tsy tena zava-dehibe ny zavatra resahanao amin'ny bilaoginao. Fa rehefa vehivavy ianao, dia mety hiharan'ny sivana ny bilaoginao. Lasibatra ihany koa ireo tranonkala ara-politika sy bilaogy nosoratan'ireo reformista sy ireo mpivavaka nasionalista. Saingy ireo bilaogy tena iharan'ny fanivanana, dia ny bilaogin'ireo mpikatroka fiarahamonim-pirenena toy ny mpianatra, vehivavy ary mpikatroka mpiasa.
Tsy tena olana ho an'ny bilaogera ny fijirihana. Hatreto dia ireo tranonkala ofisialy ihany no voajirika. Amin'ny ankapobeny, dia mijaly noho ny fifandraisana aterineto miadana, ny halafony, ary ny olana ara-teknika ambany kalitao ny olona .
Mihoatra noho izay nosariana
Ahoana no hanombatombananao ny fivoaran'ny bilaogy Iraniana nandritra izay taona vitsy lasa izay?
Afaka maneho ny hevitro manokana mifototra amin'ny fandinihako manokana fa tsy avy amin'ny fanadihadiana ara-tsiansa aho. Heveriko fa misy teritery marobe eo amin'ny olona eo amin'ny fiarahamonina, ary ny famahanana bilaogy dia fitaovana tsara hanampiana ny olona haneho ny heviny eo amin'ny fiarahamonina. Izany angamba no antony mahatonga ny vehivavy sy ny ankizivavy maro mibilaogy. Vao haingana, olon-dehibe maromaro no nanomboka nampiasa bilaogy mba haneho ny heviny ihany koa.
Ahoana ny fahitanao ny fiantraikan'ny bilaogy eo amin'ny fiarahamonina?
Mihamitombo ny sivana ao Iran ary raha tsy misy ny tranokalam-baovao sy ny gazety, dia ny bilaogy no manatanteraka zavatra hafa ivelan'ny eritreritra na dia tsy afaka matoky ny vaovao rehetra hitantsika aza isika. Afaka manova lohahevitra ho olana mafana ao amin'ny fiarahamonina ny bilaogera, ary manery ny governemanta mba handray andraikitra.